Buug cusub oo ku saabsan galmada iyo xuquuqda kulanka lammaanaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kbra iyo Paulin oo buugga ka heley. sawir: Susanna Einerstam/Sveriges Radio
Buug cusub oo ku saabsan galmada iyo xuquuqda kulanka lammaanaha
Buug loogu magac darey "Aniga iyo Adiga"
La daabacay måndag 18 september 2017 kl 08.30
Buugga lagu magacaabo ” Aniga iyo Adiga - Jag och Du" ayaa lagu lafa gurey culuunta aasaasiga ee caadada haweenka, qeybaha jirka, waxyaalaha loo isticmaalo galmada iyo ka hor-tagga uurka oo ku wajahan dadyoowga dalka ku cusub. Iyada oo weliba lagu tarjumey luuqadda carabiga.
–Waxyaabo badan ayaa buugga laga helaa oo aanan horay aqoon ugu lahayn, waxyaabahaasina oo aan xiiseeynayo inaan wax ka sii ogaado, sida ay sheegtay Paulin.
-Mararka qaarkood laguma dhiirado in waalidka ama macallinka la weeydiiyo, laakiin haddii uu buug noocan jiro waa laga baran karaa, sida ay sheegtay Paulin.
Buugga ”Du och Jag” ayay ka dambeeysaa hayadda MTM – hayadda howl-yari ku gaarsiinta saxaafadda - myndigheten för tillgängliga medier, madbacaddooda lättläst. Fikirkan ayuu horraantiisii ka soo jeedaa qoraaga buugga Inti Chavez Perez iyo Sara Teleman oo far-shaxanka lahayd.
Buuggan oo lagu qoray af iswiidhish sahlan waxaa sidoo kale laga helaa sawirro badan ee lagu sharraxayo tusaale ahaan xubnaha galmadu habka ey u shaqeeyaan, maxaa ugu wacan in gabdhuhu caado helaan, galmada ammaanka ah, xuquuqda uu shakhsigu leeyahay kolka uu lammaane la kulmo.
Kbra waxay keli ahaan uga timid dalka Eriteriya muddo saddex sannadood laga joogo. Waxay ula jeeddaa in aaney dad badani wax ka ogeyn galmada iyo habka wada noolaashaha. Haddii buugga la akhristo wax ka badan ayaa laga fahmeyaa.
–Kama hadlo, waxna kama weeydiiyo galmada iyo habka wada noolaashaha guriga markaan joogo. Saaxiibadey ayaan kala hadlaa, laakiin waalidkay kalama hadlo, sida ay sheegtay Kbra.
Krbra oo ka soo jeedda dalka Eriteriya iyo Paulin oo ka soo jeedda dalka Keenya wey ogsoon yihiin xaqa ey u leeyihiin iney MAYA yiraahdaan iyo iney iyagu awood u leeyihiin waxa ey dooneyaan ama aaney dooneyn oogadooda iney ku sameeyaan.
Abdul iyo Azzan oo ka soo kala jeedaan dalka Afgaanistaan iyo Kusdistaan ayaa qaba inay wanaag-san tahay in buugga laga helo cutub ka hadleya xeerarka iyo qaraarrada.
Abdul ayaa aamin-san inay wanaag-san tahay in goor hore la isku war-geliyo xeerarka Sweden ka jira.
Inta badan goobaha qaabilaadda dhallin-yarada iyo asxaabta ayaa laga helaa war-bixinnada la xiriira galmada, cudurrada laga qaado iyo walxaha ka hor-tagga loo isticmaalo.
–Dhakhtar ayaa ii sheegay in cinjirka galmadu uu wanaag-san yahay, ma jirin cid iskuulka iigu sheegtay habka la isku difaaco, sida uu sheegay Azzan.
Wuxuu ka soo jeedaa waddan muslin oo aan galmada la ogoleyn illaa inta laga guursado. Wuxuu ka bartay asxaabtiisa, gabdhaha iyo wiilasha iswiidhishka ee iskuulka.
–Wax walba iyagaa i baray. Waan ka faa’iidi lahaa buug, waxaan ka ogaan lahaa wax walba oo aan u baahnaa, sida uu sheegay Azzan.
Waalidku ma aqbali laheyn buug noocan ah sida ey wiilashu aamin-san yihiin. Sawirrada iyo qoraallada ayaa uga sii dari lahaa. Waxay oran lahaayeen iney iyagu in ka badan la socdaan, maadaama ey dad waaweyn yihiin.
–Haddii uu shakhsi buugga u soo ban-dhigi lahaa wey ku qosli lahaayeen, waxey ku sheegi lahaayeen nacas. Waxey ku dheggan yihiin dhaqammadoodiiqadiimiga ahaa ee waddammadoodii, sida uu sheegay Abdul.
Waxey ka welwel-san yihiin inuu waalidku ilmihiisa ku xaddido dhaqammadii waddammadooda.
–Dhallin-yarada u ogolaada xorriyadda, sida uu sheegay Azzan.
Kbra waxay aamin-san tahay inuu buuggu muhiim yahay, maadaama uu wiilasha iyo gabdhahaba siineyo aragti, wuxuu siin karaa dhiiri-gelin oo go’aan sax ah lagu gaari karo, go’aan qofka u wanaag-san, sida ay Kbra hadalkeeda ku soo gabagabeeysay.
Halkee ku habboon iney dhallaanku ka helaan macluumaadka la xiriira galmada iyo nolol-wadaagga.